ITriangle Isihlezi Phezu Kwengalane Yemiklomelo eyeCastle Premier Soccer League
Iqembu lenguqu ele Triangle yilo eselihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba se Castle Premier Soccer League ngemva kwemidlalo yeviki letshumi lesikhombisa edlalwe ngempelaviki edluleyo.
Iqembu le Triangle lithe ngokunqoba ele ZPC Kariba nge 2 ka 1 ngoMgqibelo lakhuphula inani lemiklomelo yalo laya kumatshumi amathathu lambili.
Iqembu ebelikhokhela phambilini kwemidlalo yangempelaviki ele Chicken Inn lihlezi kundawo yesibili lilemiklomelo engamatshumi amathathu lanye njalo lihwithwe ngele Triangle ngemva kokuba libe ngutshiki lobhanqa 1 ka 1 lele Dongo Sawmills ngeSonto.
Kundawo yesithathu kuhlezi iqembu le How Mine lona elinqotshwe nge 2 ka nya ngele Hwange emalahleni ngeSonto.
Iqembu leHow Mine lilemiklomelo engamatshumi amabili lathoba minwe mbili njalo lilingene ngemiklomelo leqembu le Dynamos elihlezi kundawo yesine.
Iqembu le Dynamos libe ngutshiki lobhanqa 1 -1 lele Highlanders emagumeni ngeSonto.
Limpumela ivuselele inkulumo phezu komqeqetshi weqembu le Highlanders uBongani Mafu ngoba iBosso iqale ukuhlohla ngehlandla lakuqala lomdlalo kodwa yavumela iDeMbare ukulinganisa imiklomelo kusanda kuqala ihlandla lesibili lomdlalo.
Kundawo yesihlanu kuleqembu le FC Platinum elinqobe ele Buffaloes nge 3 ka nya lakhuphula inani lemiklomelo laba ngamatshumi amabili lethoba minwe mbili.
Iqembu le Harare City lihlezi kundawo yesithupha lilemiklomelo engamatshumi amabili lesithupha ngemva kokunqoba elikwenze iqembu elihlezi ngaphansi kwalo ele Caps United lona elilemiklomelo engamatshumi amabili lanhlanu.
Kundawo yethoba minwe mbili kuleqembu le Chapungu elilemiklomelo engamatshumi amabili lane ngaphansi kwalo kuleqembu le Highlanders elilemiklomelo engamatshumi amabili lambili.
Iqembu le Hwange lihlezi kundawo yetshumi lilemiklomelo elitshumi lethoba munwe munye
Ngaphansi kweqembu le Hwange kulamaqembu amathathu alemiklomelo elitshumi lesithupha njalo lawa ngagoqela ele ZPC Kariba, ele Tsholotsho kanye lele Buffaloes.
Iqembu le Flame Lily lihlezi kundawo yetshumi lane lilemiklomelo elitshumi lane njalo lilingene ngemiklomelo leqembu le Whawha kuthi ngaphansi kwengalane kuleqembu le Dongo Sawmills elilemiklomelo elitshumi lambili.